प्रतिस्पर्धा यति धेरै बढेको छ कि यहाँ मान्छेलाई आफ्नो व्यवसाय कसरी टिकाउने भन्ने भएको छ ।
संचालक, आर. सी अटोमोबाइल्स
यो व्यवसायमा आउनु भएको कति भयो ?
त्यस्तै २० वर्ष जति पुग्यो ।
पढ्दा पढ्दै मेकानिकल सेक्टरमा काम गर्न थालें । कामको सिलसिलामा यहि सम्बन्धी धेरै ज्ञान तथा अनुभव पाएँ । मान्छेले जुन क्षेत्रको अनुभव बटुल्दै जान्छ, अन्ततः त्यही क्षेत्रमा उ सेटल हुने हो । मसँग पनि यही क्षेत्रको अनुभव भएकोले यो व्यवसायमा आएको हुँ ।
यो व्यवसायमा कत्तिको समस्या छ ?
धेरै समस्या छन् । जस्तो कि उधारोको समस्या छ । हामीले सामान त उधारो पाउँदैनौं तर गाडी मर्मत चाहिँ उधारो पनि गर्दिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । त्यस्तै ठाउँ अभावको समस्या, दक्ष मेकानिक नपाइने समस्या, कामदार नपाइने समस्या जस्ता थुप्रै समस्याहरु छन् ।
प्रसंग थोरै बदल्न चाहन्छु । अहिले बजारमा अटो क्षेत्रमा कुपनको प्रभाव नराम्ररी परेको हल्ला बाहिर आएको छ । वास्तवमा कुपन किन राख्ने र यसले बजारलाई कस्तो प्रभाव पारेको हो ?
पहिलो कुरा त अटो बजार विस्तार भैरहेको वर्तमान अवस्थामा जेन्युन पार्ट्सले मात्र बजार थेग्न नसक्ने स्थिति भएको छ । अन्य पार्ट्सले पनि काम चलाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसकारण पनि कुपन राख्ने, स्कीम दिने जस्ता सिस्टम आए । तर यो सिस्टम आउनुमा चाहिँ प्रमुख तत्व भनेको तिव्र प्रतिस्पर्धा हो । प्रतिस्पर्धा यति बढ्यो कि, पछिल्लो समय जेन्युन पार्ट्समै पनि कुपन राख्नुपर्ने बाध्यता भयो र राखेको पनि छ । अब सिप्रदीको टाटा जेन्युनले नै कुपन राखेको छ भने पछि अरुले राख्नु त स्वभाविक हो नि । एउटाले कुपन राखेर त्यही पार्ट्सहरु बेचिराखेको छ भने अर्कोले त्यही मालमा बिना कुपन बेच्न नसक्ने स्थिति भयो । त्यसकारण कुपन सबै कम्पनीले लगाउन थालेका छन् । यसले बजारमा चाहिँ अलिक नकारात्मक सन्देश गएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय मेकानिक्सको आँखा पनि कुपन राखेकै सामानमा गएको कुरा सुनिएको छ, वास्तवमा कुपन राखेको पार्ट्सले मेकानिक्सलाई के फाइदा र ?
वास्तवमा यो अलिक नकरात्मक हल्ला हो । किनभने मेकानिक्सले त चाहिएको पार्ट्सहरु हाल्ने हो । कुपन पाउँछु भनेर अर्को पार्ट्स हाल्यो भने त भोलि उसैले गाली खानुपर्छ । जहाँसम्म लाग्छ मेकानिक्सहरु कुपनमा प्रभावित छैनन् यहाँको हकमा चाहिँ । अपवादको रुपमा अन्त कतै हुनु स्वभाविक हो ।
काम अनुसारको ज्याला दिएको भए त उस्ले अन्त ध्यान नदेला नि त, यसरी कुपन सिस्टम आएको कति भयो ? कि पहिला नि थ्यो ?
हैन, पहिला त यो सिस्टम नै थिएन । यो सिस्टम आएको धेरै भएको छैन । जब यो क्षेत्रमा तिव्र प्रतिस्पर्धा बढ्दै गयो, त्यसपछि प्रतिस्प्र्धाले निम्त्याएको उपज हो यो त । प्रतिस्पर्धा यति धेरै बढेको छ कि यहाँ मान्छेलाई आफ्नो व्यवसाय कसरी टिकाउने भन्ने भएको छ । यो कुपन पनि बजारमा आफू टिक्नको लागि अपनाइएको एउटा विधि हो कि !
यदि त्यसो हो भने, कमसल सामन भएर कुपन राखिएको भने हैन ? बजारमा त जेन्युन पार्ट्स भए त कुपन राख्नै पर्दैन कमसल भएर राखेको भन्ने कुरा सुनिन्छ त !
कमसल पार्ट्स भएर कुपन राखेको भन्ने कुरामा म चाहिँ सहमत हुन्न । किनभने यहाँ टाटा जेन्युन पार्ट्सले नै कुपन राखेर बेचीराखेको छ अन्यले पनि राखेका छन् । अनि कुपन राख्दैमा त्यो पार्ट्स कमसल कसरी भन्ने ? त्यसकारण कुपन राख्नु भनेको कमसल पार्ट्सहरु बिकाउन हैन बजारमा व्यवसाय टिकाउन रचिएको एउटा उपाय हुनसक्छ । अहिले कम्पनीले आफ्ना डिलर तथा रिटेलरहरुलाई विभिन्न टार्गेट र स्कीमहरु दिइराखेको छ सोहीअनुसार आफू बाँच्न हरेक कम्पनीले कुपन राखेर प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् ।